Xiddigaha adduunka ugu qaalisan ayaa shaaca laga qaaday
Kylian Mbappe ayaa lumiyay 110 milyan qiimayn muddo 7 bilood gudahood ah, sida laga soo xigtay CIES Football Observatory.
Maxaa ka yaabiyey ciyaartoyda Real Madrid?
Bishii Juun 2020, weeraryahanka PSG Kylian Mbappe ayaa lagu qiimeeyay 234 milyan oo ginni, taasoo ka dhigeysa inuu yahay ciyaaryahanka adduunka ugu qaalisan, laakiin musiibooyinka adduunka oo dhan ayaa isaga ku kacay qiime aad u sarreeya.
CIES Football Observatory ayaa soo saartay qiimayntii ugu dambaysay ee ciyaartoyga, halkaasoo Kylian Mbappe uu kasbaday 135 milyan oo cusub sannadka cusub ee 2021 isla markaana uu hoos ugu dhacay 99 milyan oo qiimayn ah.
Cudurka ba’an ee ba’an ee loo yaqaan ‘coronavirus’ ee adduunka gilgilay sagaalkii bilood ee la soo dhaafay wuxuu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha adduunka oo wuxuu jilbaha u dhigay suuqa, iyadoo koox walba ay aragtay hoos u dhac weyn oo ku yimid dakhliga iyo qasaaraha badan.
Laakiin wararka ku saabsan suuqa oo dhan ma xuma, sababtoo ah qiimaha weeraryahanka reer England iyo kooxda Manchester United Marcus Rashford ayaa kordhay, halka ciyaartoyda kale hoos u dhacday.
Rashford, oo ay ku baxday £ 12 milyan tan iyo bishii June, ayaa haatan ah ciyaaryahanka adduunka ugu qaalisan isagoo ku fadhiya 9 149 milyan.
Weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Haaland ayaa ah ciyaaryahanka labaad ee ugu qaalisan suuqa, kaasoo qiimihiisu yahay 137 milyan oo ginni, waxaa ku soo xiga Trent Alexander-Arnold.
Halkan u guji qiimeynta – CIES Kormeerayaasha Kubadda Cagta bisha Janaayo 2021
Jadon Sancho, Borussia Dortmund – 134.4 m
Joao Felix, Atletico Madrid – 128.2 m
Alphonso Davies, Bayern Munich – 126.1 m
Maxamed Saalax, Liverpool – 121.4m
Ruben Dias, Manchester City – 114.9 m
Sadio Mane, Liverpool – 112.1 m
Ansu Fati, Barcelona – 98.2 m
Frenkie De Jong, Barcelona – 95.8 m
Ayaa diidi kara? Safka waalida ah ee PSG
The 100 Healthiest Meals at the Planet